Aliexpress ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်မြောက် Tronsmart သဘောတူညီချက်များ | Gadget သတင်း
Tronsmart သည် Aliexpress ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပွဲဖြစ်သည်
Rafa Rodríguez Ballesteros | | စပီ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ
မနက်ဖြန် အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း၏လောကရှိအရေးပါသောနေ့စွဲ. Aliexpressတရုတ်ပြည်မှအကျော်ကြားဆုံးအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပလက်ဖောင်း, \_ t ၎င်း၏ 10 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးသည်၎င်းကိုမဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ဂုဏ်ပြုကြလိမ့်မည် မယုံနိုင်စရာကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ. Tronsmart သည်ဤအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်သည် နှင့်သင်လက်လွတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူထုတ်ကုန်သုံးခုအထိကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့တယ်။
သငျသညျတေးဂီတနှင့်ဆက်စပ်သော gadget ကိုရရန်ယခုအချိန်တွင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြပါ သင်ဤအခါသမယကိုလက်လွတ်မသွားနိုင် Tronsmart သည် Aliexpress ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပရန်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ၄ င်း၏အထူးကမ်းလှမ်းမှုကိုပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းသည်ဆယ်နှစ်တာကာလရှည်လျားသည်။ သငျသညျပါတီပူးပေါင်းချင်လျှင် ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဆောင်ခဲ့သောအဆိုပြုချက်ကိုကြည့်ပါ.
1 Tronsmart ထုတ်ကုန်များအတွက် 40% ကျော်လျှော့စျေး
1.2 Tronsmart T6 Plus အား
Tronsmart ထုတ်ကုန်များအတွက် 40% ကျော်လျှော့စျေး
Tronsmart မှသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ပြသည် ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုသုံးခုအားလုံး အသံနှင့်ဂီတနှင့်ဆက်စပ်သော, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ Aliexpress ဒသမမွေးနေ့သဘောတူညီချက်များ၏အားသာချက်ယူနိုင်အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောမယုံနိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်သက်သေပြအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူရန်အခါသမယအနည်းငယ်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင်သည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်သို့မဟုတ်ဘလူးတုစပီကာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
အကွောငျး အလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ TWS (True ကြိုးမဲ့အသံ) နားကြပ် နားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်စေရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုသူတို့ပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Qualcomm ချစ်ပ် ကရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ခဲ့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးနှင့်မြန်ပြီးတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း။ ၎င်းတို့တွင် ၁၀ မီလီမီတာ AirPods ထက် ၁၃ မီလီမီတာပိုကြီးသောယာဉ်မောင်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာကိုရှာဖွေသည် ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်း ပြင်ပ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲမယုံကြည်နိုင်လောက်သောဂီတအတွေ့အကြုံအတွက်ပိုမိုသန့်ရှင်းသည်။ လေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, ၎င်း၏အားသွင်းအမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကျယ်ပြန့် ပြန်ဖွင့်ခြင်း ၂၄ နာရီ။ ဤနားကြပ်များသည်တစ်နေ့တာလုံးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေစေရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဆက်လုပ်ပါ ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တေးဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည် သင့်စမတ်ဖုန်းကိုအိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူစရာမလိုပါ။ ထို့အပြင် ကျနော်တို့လွတ်လပ်စွာသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်တေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်ဖုန်းပေါ်တွင် mono ပုံစံဖြင့်ပြောဆိုခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုမြင်လဲ AirPods မှအမှန်တကယ်အခြားရွေးချယ်စရာ Aliexpress ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည် ၎င်း၏စျေးနှုန်း၏ 50% မှာ လေ့
သင့်ရဲ့ Onyx Ace နားကြပ်ကို Aliexpress ၏စျေးနှုန်းလျှော့ချပါ
Tronsmart T6 Plus အား
ဒုတိယ option မှာ အလွန်အထူးစပီဌ, အ Tronsmart T6 Plus အား။ ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအမျိုးအစားတွင်ရှာနေသောအဓိကဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခုကိုစုစည်းပေးသောစပီကာ၊ ပါဝါနှင့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။ တစ် ဦး နှင့်အတူဤပေါင်းစပ်ပြီး ဆန်းသစ်သောဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်း တေးဂီတဟာနေရာအားလုံးမှာအသံဖြစ်ဖို့အတွက်ရလဒ်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။
Tronsmart T6 Plus အင်္ဂါရပ်များ 40W ပါဝါအထိ။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တေးဂီတကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းအားထက်မကပါ။ ပွင့်လင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘေ့တကယ်နက်ရှိုင်းသောခံစားရပါတယ်။ ငါတို့လည်းရှိသည် အဆိုပါမျိုးပွားနိုင်အောင်တန်းတူညီမျှဖြစ်နိုင်ခြေကျား၊ မရေးရာအရ၊
အသုံးပြုသူများနှစ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည် TWS နည်းပညာနှင့်အတူ။ သောကြောင့် ကျနော်တို့ကတခြားသဟဇာတစပီကာတွေနဲ့သူတို့ကိုတွဲနိုင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးစတီရီယိုအသံသည်။ ထို့အပြင် Tronsmart T6 Plus နှင့်အတူ သင်၏ကိရိယာ၏အသံလက်ထောက်ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ သင် Aliexpress တွင် ၀ ယ်နိုင်သည် 43% လျှော့စျေးနှင့်အတူ.
ဤနေရာတွင် T6 Plus စပီကာကို Aliexpress တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ အထူးလျှော့စျေး
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က ၂,၀၁၉ နှစ်ကုန်တွင်စတင်ခဲ့သည် ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကြိုးစားရန်ကံကောင်းခဲ့ကြသည် နှင့်လုပ်ဆောင် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ သူတို့ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောသုံးစွဲသူများထံမှအလွန်ကောင်းသောသတင်းများကြောင့် Tronsmart ၏ Spunky Beats သည်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။ သူတို့ကရှိသည် နောက်ဆုံးပေါ် Qualcomm ချစ်ပ် ကမ်းလှမ်းသောစျေးကွက်၏ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော connection ကိုမြန်နှုန်းနှင့်စစ်ဆင်ရေး.
El Qualcomm aptX codec အဆိုပါ Spunky Beat အသုံးပြုသောတစ် ဦး ကိုဆက်ကပ် CD ၏အသံနှင့်အရည်အသွေးတူသည်။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအလွန်ကျေနပ်အောင်စေသည်တစ်ခုခု။ အသံအတိုးအကျယ်အသံအရည်အသွေး ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်း ထို့အပြင်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်၎င်းတို့အားသင့်အားစိတ်ဝင်စားရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်များဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်, Aliexpress ၏ 10 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကျေးဇူးတင်စကားသူတို့ကိုသင်ကိုင်နိုင် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ၇၀% လျှော့စျေးဖြင့်.
ဒီနေရာတွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွင် Aliexpress တွင် Spunky Beat ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Tronsmart သည် Aliexpress ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပွဲဖြစ်သည်